अनिशा र कञ्चनको बि'हेको फोटोखिच्ने दाई पहिलोपटक मिडियामा,बन्द कोठाभित्र यसरी गरेको रहेछ बि'बाह हेर्नुस -
Home News अनिशा र कञ्चनको बि’हेको फोटोखिच्ने दाई पहिलोपटक मिडियामा,बन्द कोठाभित्र यसरी गरेको रहेछ...
अनिशा र कञ्चनको बि’हेको फोटोखिच्ने दाई पहिलोपटक मिडियामा,बन्द कोठाभित्र यसरी गरेको रहेछ बि’बाह हेर्नुस
२०७४ जेठ दोस्रो साता, अर्थ मन्त्रालयको आफ्नो टीम लिएर मन्त्री डा. युवराज खतिवडा बजेटका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार पुगेका थिए। साँझको समय थियो, डिनरपछि अर्थ मन्त्रालयको टीमले बजेटका विविध विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न थाल्यो।
छलफल चलिरहेको थियो। प्रसंगवश मन्त्रालयको टीम मध्येका एक जनाले विनोद चौधरीको नाम लिए। प्रधानमन्त्री ओलीले तत्तकाल जवाफ दिंदै भने, ‘तपाईंँहरु सबैले डायरीमा यो नाम नोट गर्नुस् उहाँ ठीक लगाउनुपर्ने व्यक्ति हो।’
प्रधानमन्त्री ओलीको ‘ठीक’ लगाउने यो स्वभावका विषयमा पूर्व एमालेजन २०४८ मा भएको एउटा प्रसंग सुनाउँछन्। ओली झापाको कुनै चुनावीसभाबाट फर्कँदै थिए, खाना खानका लागि एउटा होटलमा पसे। अर्को टेबलमा बसेका एक जनाले उनलाई र पार्टीलाई लक्षित गरेर चर्को स्वरमा ‘र्‍यागिङ’ गरे।
खाना खाएपछि ओली त्यहाँबाट चुपचाप हिंडे, तर र्‍यागिङ गर्ने ती व्यक्तिको जानकारी लिएर। त्यसपछिका तीन वर्ष त्यसै कट्यो। जब २०५१ को चुनावमा एमाले विजेता बन्यो। ओलीले ती र्‍यागिङ गर्ने व्यक्ति, जो सरकारी सेवामा सबैभन्दा जुनियरमध्ये एक खरिदार थिए, उनलाई काठमाडौंबाट जुम्ला सरुवा गरेर ‘ठीक’ पारिदिए।
प्रधानमन्त्री ओली जसरी अहिले डलर अर्बपति विनोद चौधरीलाई ठीक पार्नका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई नाम नोट गराइरहेका छन् तर यो सम्बन्ध पहिलेदेखि नै यस्तो तिक्ततापूर्ण भने थिएन। कुनै बेला ओली चौधरीलाई खुब माया पनि गर्थे, सम्मान पनि दिन्थे।
त्यसको कारण र जानकारी ओली गुटलाई मात्रै होइन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि एमालेका वरिष्ठ तहका नेता करिब करिब सबैलाई छ। ओली २०६४ मा मृगौला प्रत्यारोपणका लागि नयाँ दिल्ली गएका थिए। अपोलो अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपणपछिको केही समय उनले चौधरीको नयाँदिल्लीस्थित निवासमा आराम गरेर बिताए।
त्यसैगरी, जसरी ६ महिनाअघि सिंगापुरमा उपचार गर्न जाँदा ओली साउथहेभन-२, हिन्हिडे वाकस्थित एक व्यवसायीको पाँचौं युनिटको आठौं तलाको अपार्टमेन्टमा आराम गरेर समय बिताएका थिए। उनले त्यही निवासबाट टेलि-कन्फ्रेन्समार्फत नेपालमा क्याबिनेट मिटिङ समेत गरेका थिए। तर, विरोध भएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठक नभनेर ‘स्वास्थ्य लाभ कामना’ को आदानप्रदान भनिएको थियो।
नयाँ दिल्लीमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा अस्पतालदेखि निवाससम्मै चौधरीका कान्छा छोरा वरुणले ओलीको ‘टेक केयर’ गरेका थिए। नयाँ दिल्लीदेखि सुरु भएको ओली-चौधरीको यो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध लामै समय चल्यो पनि।
ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि त्यो सम्बन्धले निरन्तरता पाएको थियो। कतिसम्म भने जतिबेला भारतीय नाकाबन्दी लागेको थियो, त्यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’बाट नाकाबन्दी हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले चौधरीलाई भारतसमेत पठाएका थिए।
तर, ओली जब दुई वर्षअघि दोस्रोपटक दुई तिहाई बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बने, चौधरीसँग उनको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धहरु देखिन थाले। कतिसम्म भने महत्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा अघि बढाएको सिजी टेलिकमले प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि चौधरीले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणबाट एकीकृत लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्।
र, त्यसको कारण अरू नभएर प्रधानमन्त्री ओलीको त्यही ‘ठीक पार्नुपर्छ’ भन्ने रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने बुझाई यो विषयसँग सरोकार राख्ने धेरैको छ। कुनै बेला प्रेमपूर्ण रहेको ओली र चौधरी बीचको सम्बन्ध बितेको केही वर्षयता यति धेरै तिक्ततापूर्ण किन भयो?
त्यसको प्रष्ट देखिने एउटा कारण राजनीतिक मत भिन्नता हो भन्ने छ तर जानकारहरु भन्छन्, यो सम्बन्ध बिग्रनुमा राजनीतिमात्रै कारक होइन। राजनीतिको सन्दर्भमा पहिलो संविधानसभामा तत्कालिन एमालेले चौधरीलाई समानुपातिक सभासदका रूपमा संसदमा पुर्‍यायो। दोस्रो संविधानसभा चुनावको बेला एमालेले चौधरीलाई प्रत्यक्ष निवार्चनमा सहभागी हुन आग्रह गर्‍यो। उनी त्यसका लागि तयार पनि भए।
चौधरी नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट चुनावी मैदानमा उत्रने तयारी गरिरहेका थिए। त्यसका लागि जिल्लाबाट उनको सिफारिस पनि भएको थियो। तर, माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई गोरखाको अलावा रुपन्देही-४ बाट पनि चुनावी मैदानमा भाग लिने घोषणापछि चौधरीको चुनावी खेल बिग्रियो।
माओवादीका तर्फबाट भट्टराई रुपन्देही-४ को चुनावी मैदानमा आएपछि एमालेका प्रत्यासी विष्णु पौडेल त्यहाँबाट नवलपरासी-३ मा आएर खडा हुने निर्णय गरे र उम्मेदवारी पनि दिए। आफूले चुनावी तयारी गरिरहेको ठाउँबाट पौडेल नै उम्मेदवार बनेपछि राजनीतिमा महत्वाकांक्षा पालेर बसेका चौधरी चुनावी मैदानबाट पछि हट्नुपर्‍यो।
उता कार्यकर्ता र नेताले र्‍याखर्‍याख्ती पार्न थालेपछि पौडेल फेरि नवलपरासी-३ मा उम्मेदवार नबनेर भट्टराईसँगै चुनाव लड्न रुपन्देही-४ मा पुगे। त्यस चुनावमा पौडेलले भट्टराईलाई हराए पनि। तर, पौडेलका कारण चौधरीको राजनीतिक महत्वाकांक्षामाथि भने ठूलो आघात पर्‍यो।
चौधरीलाई लाग्यो- कम्युनिष्टहरू विश्वास योग्य हुँदैनन्। त्यहाँ उनी आफ्नो राजनीतिक महत्वाकांक्षालाई पनि अघि बढाउन सक्दैनन्। उनले विस्तारै कांग्रेसतर्फ आफ्नो झुकाव बढाउन थाले। जानकारहरु भन्छन्- त्यो झुकावसँगै एमाले नेतासँग उनको राजनीतिक व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउन थाल्यो।
Previous articleप्र’हरीले पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा जान रोकेपछि झ’डप ! स्थिति त’नाव’ग्रस्त, सडकमै रु’वा’बासी Prithivi
Next articleसारा नेपालीको लागी खुशीको खबर, को*रोना खो’प लगाउने यस्तो तयारी, १६ हजार खोप केन्द्र (जानकारीका लागि सेयर गराै)